China Solar Panel Cable Splitter 1 to 4 T Branch izihlanganisi mveliso kunye nabathengisi | UBUNGOZI
Iphaneli yelanga Cable Splitter 1 ukuya kwi-4 T yezihlanganisi zeSebe
Isidibanisi sesebe esine-MC4 T (1 Set = 4Male1 Female + 4Female 1Male) sisibini sezihlanganisi ze-MC4 zeepaneli zelanga Ezi zihlanganisi zisetyenziselwa ukunxibelelanisa umtya weepaneli zelanga ezi-4 kunye nokunxibelelana okufanayo, kulunge ne-MC4 Amabhinqa amaDuna angatshatanga Isinxibelelanisi esisodwa kwiiModyuli ze-PV , Esi sihlanganisi sesebe se-4T sinokulingana zonke ii-MC4 Type Photonic Universe solar panels. Yi-100% engenawo amanzi i-IP67, ukuze isetyenziswe ngaphandle kuyo nayiphi na imeko yemozulu.
Inkcazo ye-4 kwi-1 MC4 T yesinxibelelanisi seSebe
Isinxibelelanisi seSola se4in1 sisisombululo esifanelekileyo sokudibanisa iipaneli ezine ngokufanayo. Ezi zihlanganisi ze-4T zinokumelana nokuguga okuphezulu kunye nokunyamezelwa kwe-UV, kubenza ukuba babe bubungqina bemozulu kwaye bakwazi ukumelana neemeko ezinzima. I-rivet kunye ne-lock zisetyenziselwa ukuqhagamshela intambo kwaye akukho zixhobo zongezelelekileyo ziyafuneka kwindibano okanye ekusasazeni iiplagi.
Idatha yobuGcisa yeMC4 4T yeSebe eliDibanisa 1000V
Uncedo lwe4T PV Isinxibelelanisi
Ukuzoba kweMC4 4to1 T Splitter
Iphakheji ye4in1 MC4 Solar Connector
Egqithileyo Solar Isixhumi seSebe leMC4 T iParal Solar Panels
Okulandelayo: I-5 kwi-1 yelanga yokuNxibelelana kweSebe eliDibanisa iiCandelo zoLwandiso
1in4 isebe mc4
1to4 yokuchaka yesebe elanga
4in1 pv iplagi
Isinxibelelanisi se-4T yesebe
4way solar isinxibelelanisi manzi
4Y isinxibelelanisi sesebe